टिकटकमा नेपालली नायक नायिकाको चटक, कसको फलोवर्स कति ? को छ सबै भन्दा अगाडी – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/टिकटकमा नेपालली नायक नायिकाको चटक, कसको फलोवर्स कति ? को छ सबै भन्दा अगाडी
कलाकारहरु फुर्सदका समयमा के गर्छन् होला ? नेपाली दर्शकलाई यस्तो प्रश्न आजकाल सायदै हुन्छन् । किनकी कलाकारहरु सामाजिक सञ्जालका विभिन्न भेराईटि एपहरुमा देखिनै रहन्छन् । पहिले पहिले कलाकारलाई फिल्मा मात्रै देख्न पाईने गर्थ्यो ।त्यहिँ कारण कलाकारको चर्चा र स्टाडम निकै हुने गरिन्थ्यो । तर, आजकाल केही कलाकारको मात्रै बिरलै स्टारडम रहेको देख्न सकिन्छ । यसको कारण हो आजकालका कलाकारहरु सहजै र सरलै जहाँपनि उपलब्ध हुन थालेको छन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि फेसबुक, इन्ष्टागाम, युट्युब र टिकटक लगायतका एपहरुमा आजकाल कलाकारलाई सरलै भेट्न सकिन्छ । आज फिल्मी फण्डाले केही टिकटके कलाकारहरुको वारेमा चर्चा गरिरहेका छौं । केही नायिकाहरुले आफ्नै गीत र संवादमा टिकटक बनाउने गरेका छन् भने केहीले हिन्दी गीत र संवादलाई प्रथामिकता दिएका छन् ।
निकै समयदेखि टिकटकमा जोडिएकी नायिका हुन् बर्षा राउत । टिकटकमा वर्षाका आठ लाख ४३ हजार ६ सय फलोअर्स छन् । यसैगरी उनले कुल मिलाएर १ करोडभन्दा बढी लाइक्स प्राप्त गरेकी छन् ।
टिकटकमा चम्किएकी नायिका हुन् आँचल शर्मा । आफ्नै गीतहरुमा १५ सेकेण्डको टिकटकमा व्यस्त हुने उनलाई टिकटकमा धेरैले पछ्याएकी छन् । उनका फलोअर्स पाँच लाख ८४ हजार जना छन् ।
आफ्नो अभिनय र नृत्यलाई विशेष स्थान टिकटकमा दिने नायिका हुन् नीता ढुंगाना । उनले टिकटकमा दुई लाखभन्दा बढी फलोअर्स कमाएकी छन् । नीताले अहिलेसम्म ५ सय १७ वटा भिडियो पोस्ट गर्न भ्याएकी छन् ।
पछिल्लो समय पुजा शर्माले आफ्नो घरको अवस्था र रहनसहन समेत टिकटकमा हाल्ने गरेकी छन् । उनले टिकटकमा नेपाली रहिन्दी गीत तथा संवादहरुलाई बढि प्रथामिकता दिने गरेकी छन् । उनको टिकटकमा दुई लाख ६८ हजार फलोअर्स छन् भने अहिलेसम्म ८० भिडियो पोस्ट गरेकी छिन् ।
पछिल्लो समय टिकटकमा देखिएकी नायिकी मध्ये अर्की नायिका हुन् केकी अधिकारी । तर, उनी निकै कम समय टिकटकलाई दिने गर्छिन् । केही लोक गीतमा पनि उनले टिकटक बनाएकी छिन् । उनको टिकटकमा १ लाख २० हजार भन्दा बढि फलोअर्स रहेका छन् ।
टिकटकमा १०९ वटा भिडियो पोष्ट गरी नायिका प्रियंकाको पनि ३ लाख ६६ हजार भन्दा बढि फलोअर्स छन् । नेपाली तथा अिन्दी गीतसँगै आफ्नो रहनसहन वारे पनि उनी टिकटक भिडियो बनाउने गर्छिन् । उनलाई अहिलेसम्म ३ करोड बढि लाईक मिलेको छ ।
हालै टिकटकमा जोडिएकी नायिका हुन् बर्षा शिवाकोटी । शुरुमा टिकटक मन नपर्ने बताउने गरी बर्षा प्रमोशनको साहारा टिकटक हुने संभावना देखेर आएको बताएकी छिन् । उनको फलोअर्स भर्खरै शुरु भएको देखिन्छ ।
कहिले काहीँ टिकटकमा देखिने नायक हुन् प्रदिप खड्का । उनले आफ्नै सामाग्रीलाई प्रोत्साहन गरर्ने गरेका छन् । विशेषगरि आफ्नो सुटिङको समयको भिडियोहरु उनले टिकटकमा हाल्ने गरेका छन् । हालैसालै टिकटकमा आएका उनको पनि फलोअर्स बढ्ने क्रममा रहेको छ ।
टिकटकमा देखिने अर्का नायक हुन् पल शाह । ५० हजार बढि फलोअर्स बनाएका उनले अहिलेसम्म ११२ वटा भिडियोहरु पोष्ट गरेका छन् । विशेष गरि नेपाली गीत र त्यसमा पनि आफ्नै गीतहरुलाई उनले बढि प्रथामिकता दिने गरेका छन् ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका ६५ जनाकाे आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ
भारतको नाका अहिले खुल्दैन, लकडाउन लम्बिने छ – ओली